Ungawavala kanjani amathebhu amaningi ku-Microsoft Edge ngasikhathi sinye | Izindaba zeWindows
Lapho sifuna imininingwane yokwenza umsebenzi, uhambo, isabelo sekilasi ... into engenzeka kakhulu ukuthi isiphequluli sigcina ngo inombolo enkulu yamathebhu avulekile, ngaleyo ndlela kube yisiphithiphithi okuthi, ngokuya ngesiphequluli esisisebenzisayo, kungathinta ukusebenza kwemishini yethu.
Endabeni ye-Edge, inombolo ephezulu yamathebhu avulekile ithinta kancane i- ukusebenza kweqembu kunezinye iziphequluli, njenge-Chrome. Enye indlela yokuvala wonke amathebhu ukuvala isiphequluli ngqo, isisombululo esisiphoqa ukuthi sisivule kabusha isiphequluli ukuze siqhubeke nosesho.
Kodwa-ke, i-Edge, njengezinye iziphequluli, sinenketho yoku vala wonke amathebhu esivule ngawo esipheqululini ngaphandle kokuyivala. Enye inketho, kimi ethakazelisa ngokwengeziwe nokuthi ngiyisebenzisa nsuku zonke, kungenzeka ukukwazi ukuvala wonke amathebhu ngaphandle kwalesi esikuso.
1 Uwavala kanjani wonke amathebhu avulekile ku-Edge
2 Ungawavala kanjani amathebhu amaningi ku-Edge
Uwavala kanjani wonke amathebhu avulekile ku-Edge
Uma sifuna ukuvala wonke amathebhu esiwavule ku-Edge sishiya kuphela ithebhu esivule kuyo, kufanele sibeke igundane kuthebhu okukhulunywa ngayo, cindezela inkinobho yegundane kwesokudla bese ukhetha Vala amanye amathebhu.
Ngaleso sikhathi, wonke amathebhu esiwavule e-Edge azovalwa kushiya kuphela ithebhu esivule kuyo.
Ungawavala kanjani amathebhu amaningi ku-Edge
Lapho sesitholile amakhasi wewebhu esifuna ukusebenza nawo, futhi sivale wonke amanye amathebhu, kufanele hudula amathebhu phezulu kwesobunxele.
Okulandelayo, sizibeka kokugcina kwesokudla esifuna ukukugcina, sibeka igundane kuthebhu, cindezela inkinobho yegundane langakwesokudla bese ukhetha Vala amathebhu ngakwesokudla.
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba zeWindows » General » Ungawavala kanjani amathebhu amaningi ku-Microsoft Edge ngasikhathi sinye
Ungaxhuma kanjani nge-SSH kuseva kusuka ku-Windows